WhamBam စစ်သည်များ - ပဟေဠိ RPG (WhamBam Warriors - Puzzle RPG) - 2Game
▪ Author: Linekong
▪ Publish date: 23/05/2018
8.67 points -3votes
လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုဦးနှောက်-tickling မဟာဗျူဟာဖြစ်လာဘယ်မှာ # အဆိုပါပဟေဠိ RPG
ချစ်စရာပေမယ့်အားကြီးသောဇာတ်ကောင်ရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူ #Go WhamBam!
စစ်တိုက်ခြင်းငှါအဆင်သင့် 200 ကျော်ထူးခြားတဲ့သူရဲ!
သူတို့ရဲ့အရူးကျွမ်းကျင်မှုစုဆောင်းနှင့် creepiest ထောင်ထဲမှထွက်ရှင်းလင်းရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကုန်းပတ်တည်ဆောက်
အဆိုပါ Coliseum အတွက်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ PvP mode ကို #Experience!
တစ်ကုန်းပတ်ဖန်တီးနှင့်သင့်ပြိုင်ဘက် outplay မှနည်းဗျူဟာကိုသုံးပါ!
အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများနှင့်အတူထူးခြားတဲ့မိကျောင်း! ရေညှိကနေဖုတ်ကောင်မှ – သူတို့အားလုံးကိုအနိုင်ယူ!
သင့်ရဲ့သူရဲဖန်တီးမှုကိုပေါင်းစပ် အသုံးပြု. ခက်ခဲအဆင့်အောင်မြင်မှုများ!
ကိုင်တွယ်ရန် #Too အများကြီး? ဒီယေဂိုနှင့်အတူ WHAMBAM GO !!
မဖွယ်မရာ Diego မှအောင်ပွဲရန်သင့်စစ်တိုက်သယ်ဆောင်မည်!
Android အတွက် WhamBam စစ်သည်များ – ပဟေဠိ RPG (WhamBam Warriors – Puzzle RPG) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ WhamBam စစ်သည်များ – ပဟေဠိ RPG (WhamBam Warriors – Puzzle RPG) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, WhamBam စစ်သည်များ – ပဟေဠိ RPG (WhamBam Warriors – Puzzle RPG) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် WhamBam စစ်သည်များ – ပဟေဠိ RPG (WhamBam Warriors – Puzzle RPG) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ WhamBam စစ်သည်များ – ပဟေဠိ RPG (WhamBam Warriors – Puzzle RPG) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် WhamBam စစ်သည်များ – ပဟေဠိ RPG (WhamBam Warriors – Puzzle RPG) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!
Read more: WhamBam Warriors - Puzzle RPG